Ubuntu 17.04 yatove pakati pedu, ichi ndicho chinhu chitsva chatichawana muUbuntu | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 17.04 yatove pakati pedu, ichi ndicho chinhu chitsva chatichawana muUbuntu
Sezvatakazivisa pakutanga kwesvondo rino, Ubuntu 17.04 yave kuwanikwa kune wese munhu. Iyo nyowani vhezheni yeUbuntu yakaberekwa pakati pemakakatanwa nenhau kubva kuCanonical, kambani yemubereki yaUbuntu, asi izvi hazvireve kuti iri vhezheni isina chinhu, zvakapesana.
Ubuntu 17.04 inozivikanwa nekuve neazvino vhezheni yeGnome, Gnome 3.24, asi Kubatana kuchiri iyo default desktop. Desktop inoramba ichitsvaga uye shanduko. Lubuntu 17.04, Ubuntu's light flavour, haina LXQT asi ine LXDE.
Iko shanduko kana zvitsva zveUbuntu 17.04 zvinoverengeka. Pakati pezvakanyanya kukosha ndiko kuwedzerwa kweiyo kernel 4.10 kune kugovera. X.Org 1.19 uye Mesa 17 zvakawedzerwawo.
Ubuntu Budgie ndiyo itsva yepamutemo inonaka inouya kubva muruoko rweUbuntu 17.04
Ubuntu Budgie 17.04 ndiyo yekutanga yakasununguka Ubuntu kuburitswa neye inozivikanwa Solus desktop, ichangobva kunhuhwirira yepamutemo uye nyowani yezvose. Iyi flavour ndiyo ichave inokatyamadza kupfuura zvese nekuda kwehunhu hwayo, asi haizovi iyo chete inokwezva kutarisisa sezvo Xubuntu iri zvakare yakajeka chiedza kune vakawanda uye Ubuntu Gnome ndiyo ichave inotariswa kutarisisa kwevakawanda.
Asi chinonyanya kukosha uye chinonakidza shanduko ndiko kuderera kwekushandisa kwekuchinjisa ndangariro. Kuchinjanisa ndangariro hakuchazodiwa kana zvirinani hazvidi kuve zvakapetwa gondohwe redu. Iyo yekuchinjisa memory nzvimbo haichazoshandiswazve pekutanga uye mune dzimwe nguva inogona kubviswa, kunyangwe zvisingakurudzirwe kudaro. Asi zvirokwazvo shanduko iyi ichaita kuti vazhinji vashandisi veUbuntu vasavandudze yavo yekushandisa system asi ita yakachena kuisa.
Kana iwe usina Ubuntu uye uchida kuiisa, mune izvi link Iwe unogona kuwana kurodha pasi kweiyo Ubuntu 17.04 vhezheni uye imwe yepamutemo kuravira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 17.04 yatove pakati pedu, ichi ndicho chinhu chitsva chatichawana muUbuntu